1903 (Eprel 22): Onye ndu Jiu, Nagaoka Nagako, nke e mechara mara Jikōson, mụrụ na mpaghara Okayama.
1934 (Septemba 20): Nagaoka natara ọhụụ site n'aka "chi nwanyị kachasị elu."
1941 (ụbọchị amaghi): Jiu 璽 宇 guzobere. Ndị otu Kōmanjikai Dōin 紅 卍 字 会 道 院 (Red Swastika Society), yana onye egwu bọọlụ ama ama Japan bụ Go Seigen 呉 清源, gụnyere.
1943 (mgbụsị akwụkwọ): Makoto no hito Was の 人 (Ezigbo ndị mmadụ) e bipụtara.
1945 (February 8): Ndị uwe ojii wakporo ụlọ ebe onye ndu Jiu na ndị otu ya bi, na enyo enyo na nkà ihe ọmụma “ụwa ọhụrụ”.
1945 (March 3): Nagaoka tọhapụrụ n'ụlọ mkpọrọ. Ndị uwe ojii gara n'ihu.
1945 (May 25): Nagaoka na ndị otu gbapụrụ n'ụlọ ha n'ihi ogbunigwe.
1945 (May 31): Nagaoka natara okwu nke akara “nlọghachị” Jiu ma kọwaa ebumnuche ya na Nagaoka.
1945 (July 12): Oracle kwupụtara na "Jikō" bụ onye nnọchi anya Amaterasu Ōmikami ezigara iji nyere eze ukwu aka; A na-akpọ Nagaoka Jikōson 璽 光 尊 site n'oge a gaa n'ihu.
1946 (May): "Ihe omume MacArthur" mere; ndị uwe ojii na-enyo enyo mụbara, ndị nta akụkọ malitere inwe mmasị.
1946 (November 27): Onye ama ama sumut onye mmeri Futabayama 山 葉 山 sonyeere Jiu. Jiu kwagara Kanazawa.
1947 (Jenụwarị): "Ihe omume Kanazawa" mere.
1947 (May): Futabayama hapụrụ Jiu.
1948 (Nọvemba): Go Seigen na nwunye ya hapụrụ Jiu.
1983 (August 16): Jikōson nwụrụ.
2008: Katsuki Tokujirō nwụrụ.
2010 (July): Yamada Senta, onye na-akwado Jikōson ogologo oge, nwụrụ.
2014 (November): Go Seigen nwụrụ.
A mụrụ Nagaoka Nagako na 1904 na mpaghara Okayama. Ọ lụrụ na 1925. Ka ọ na-erule 1928, oke ahụ ọkụ malitere ya wee daa na steeti dị ka ọhụụ. O kwuru na na Septemba 20, 1934 ọ natara mkpughe n'oge ọ gara njem wee zute otu chi nke gwara ya ka ọ kuzie "eziokwu ebighi ebi na-agbanwe agbanwe, zọpụta ndị mmadụ na ịrụ ọrụ maka mba ahụ n'oge oke mkpa." Nkulite mmụọ nke a gosipụtara nghọta onwe onye nke ọrụ pụrụ iche iji zọpụta mba ahụ na ọdachi. Ihe ndekọ nke njem ọhụụ bụ ogologo oge nke ịmara okpukpe ndị Japan, ndị a gụnyere akụkọ Buddha na akụkọ ndị ọzọ. Ahụmahụ Nagaoka, dịka akụkọ ndị ọzọ yiri nke ndị ọzọ malitere / ndị isi nke okpukpe ọhụrụ, gosipụtara akụkọ banyere ndị na-ajụ ndị mmụọ ase si mpaghara Tohoku bụ ndị a na-akpọkarị n'ime ọrụ dị nsọ na ndụ ha site na ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ nnukwu ọrịa.
Site na 1935, Nagaoka dọtara obere ndị mmadụ n'ihi nkwupụta na omume ime mmụọ ya. Alụmdi na nwunye ya tisasịrị ma di ya pụọ. Oomoto (nnukwu okpukpe ọhụrụ nke bu ụzọ kpọọ aha Ōmotokyō na otomoto) nwere mmetụta miri emi n’echiche na omume ya, gụnyere echiche ụwa na ederede mmụọ, nke Oomoto kwalitere site na njikọ ya na okpukpe ọhụrụ nke China na nzukọ enyemaka Kōmanjikai (Red Otu Swastika).
Otu onye a ma ama na Kōmanjikai (site na alaka ụlọ ọrụ Japan, Kōmanjikai Dōin) bụ onye China mụrụ Go Seigen, nke a na-ewere dị ka otu n'ime egwuregwu egwuregwu go (Japanese chess). Gaa na nwunye ya ghọrọ ndị otu ntụkwasị obi nọ n'ime ime Nagaoka rue mbubreyo 1948, mgbe ha hapụrụ otu ahụ.
Kōmanjikai Dōin gbawara na 1940 n'ihi na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume na ndị otu nọ na Japan ịnọgide na-enwe mmekọrịta na Kōmanjikai na China n'etiti amụma ọchịchị na ịchị achị nke Japan. Ọtụtụ n'ime ndị òtù ahụ sonyeere Kōdō Daikyō 皇 道 大 教, usoro ọmụmụ Shinto nke a na-ejikọtaghị na otu òtù a ma ama. Onye guzobere ya, Minemura Kyōhei, onye ọchụnta ego nke nwere mmasị na Ngwuputa, kwenyere n'echiche ọhụrụ nke ụwa. Isi mmụọ nsọ mmụọ maka Kōdō Daikyō bịara n'ụdị okwu (shinji) site na ase. Ndi otu a jiri okwu ndia duzie oru mmepe.
Na 1941, aha Kōdō Daikyō gbanwere na Jiu. Minemura nyere Nagaoka iwu ka o mee emume n'etiti 1936 na 1942 iji meziwanye akụ na ụba nke ọla kọpa. Ọkwá ya dị ka onye na-ajụ ase toro n'etiti gburugburu ya, ruo n'ókè nke na e mechara nyefee ya ọrụ nke nduzi ime mmụọ na onye ntụgharị okwu nke mkpughe.
N'oge bu ụzọ, ndị uwe ojii nyochara ìgwè ndị na-akwalite mmeghari ụwa n'ihi na ihe ha na-akụzi nwere ike imegide usoro iwu obodo na itinye Shinto. Ndị ọchịchị kagburu Oomoto, Tenri Honmichi na otu ìgwè ndị ọzọ n'etiti etiti afọ 1930. Ọ bụ ezie na echiche ndị megharịrị ọhụrụ na ụwa na-akwadoghị ka gọọmentị nyere aka nwere ike iso kpata nke a, ndị ọrụ gọọmentị na-echekwa na ọgbakọ okpukpe ọhụrụ nwere ikike ịchịkọta ndị na-abụghị ikike ha.
Na February 8, 1945, ndị uwe ojii wakporo ụlọ dị na Yokohama ebe Nagaoka na ọtụtụ ndị ọzọ bi. Agbanyeghị na nke a bụ inyocha etu azụmahịa si aga, mwakpo ahụ kpughere otu mpempe akwụkwọ, Makoto no hito (Ezi ndị mmadụ), nke nwere ntụaka maka mmegharị ụwa. E jidere Nagaoka ozugbo ma tụọ ya mkpọrọ ruo izu ụfọdụ. Ọ laghachiri n'ụlọ ahụ mana a manyere ya ịhapụ Tokyo ya na mmadụ iri ndị ọzọ na May 25, 1945 n'ihi mwakpo ụgbọ elu. Mgbe agha ahụ biri, ndị uwe ojii nọgidere na-ele ìgwè ahụ anya.
Na Mee 31, na ebe obibi nwa oge ọhụrụ na Tokyo, Nagaoka nyefere okwu ọnụ nke kwupụtara ọhụụ maka otu a. Ọ bụ mmalite nke oge esemokwu dị ukwuu n'etiti otu ahụ n'onwe ya. Ọ kpọrọ oku ka ndị otu ahụ were ozi Nagaoka banyere mmeghari ụwa ọhụrụ na mba ọzọ. Nagaoka jiri chi ọ kwenyere na ọ ga-azọpụta ụwa mata. Ndị na-eso ụzọ ya malitere ịkpọ ya Jikōson. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro niile Jiu nwara site na mgbe ahụ dabere na okwu. Isi okwu ndị a gụnyere atụmatụ nke imegharị ụwa n'okpuru kami, ụkpụrụ na post-ụwa na mmeghari ohuru na nchịkwa ya, nkọwapụta zuru oke maka ọrụ ndị otu a na-eme kwa ụbọchị, yana ọrụ ndu na atụmatụ maka iwulite ego ntọala maka ihe omume n'ọdịnihu.
Okwu ndi a ghọrọ ihe kacha mkpa na ọrụ ime mmụọ Jiu. Ha gwara onye nke ọ bụla ka o soro mee ihe iji kwalite mmeghari ụwa, dị ka ịgbagharị alaeze ukwu iji dọọ eze ukwu na ezinụlọ ya aka na ntị banyere ọdachi ndị na-abịanụ ma ọ bụrụ na ha ejighị mmegharị ụwa kpọrọ ihe. Agha ahụ akwụsịbeghị, nke a ka dịkwa mkpa ime n'oge ahụ. Ndị otu Jiu kwenyere na e boro ha ọrụ pụrụ iche iji zọpụta ụwa na nke a kpaliri ha ma mee ka echiche nke ihe ha nwere na nke onwe ha sie ike. N'otu oge ahụ, Jiu kewapụrụ onwe ya iche na mpụga ụwa, na-ajụ ọtụtụ akụkụ ka ndị na-abụghị ndị ọzọ banye n'ụwa ha.
Okwu ụgha ahụ kwuru ka e guzobe “Jiu cabinet”, gụnyere ọtụtụ ndị isi na-eduga ụbọchị ahụ. Otu n'ime ha bụ Ọchịagha Kasịnụ nke Njikọ Aka, General Douglas MacArthur. Ndị otu Jiu kwuru na ha zutere MacArthur, nke gaara abụ ihe pụrụ iche n'ihi na ya na ndị nkịtị Japan nwere mmekọrịta chiri anya n'oge ọ nọrọ na Japan (August 30, 1945 ruo Eprel 16, 1951). Ma ha zutere MacArthur ma ọ bụ na ha ezughị, ndị uwe ojii Japan jisiri ike na-enyocha otu ahụ mgbe oge a gasịrị.
Usoro njikọ nke oge nke netwọkụl ndị uwe ojii ka nọ na-arụ ọrụ n'afọ ndị mbụ nke Ọrụ ahụ, a gwara ndị uwe ojii ka ha gaa Ngalaba Nchedo Ọha wee gwa ha banyere "ndị otu na-enyo enyo." Nkewa nke SCAP guzobere nkewa a, okwu achoro nke eji zoo aka na ochichi ndi oru aka ndi ozo nke a na akpo dika Chief Commander for the Allied Powers. Ndị ọrụ uwe ojii na-ahụ maka Ọha Ọha na-atụkwasịkarị obi na ikpe nke ndị uwe ojii Japan, bụ ndị na-achịkọta ozi na ala. Nyere ndị ikpe ahụ zụrụ mkpebi ndị ahụ tupu usoro nchịkwa, ọ ga-abụ na ha tinyere nrụgide na Jiu n'ihi akụkọ ihe mere eme ya. Ndị uwe ojii gosipụtara otu a dị ka nke nwere ike imebi nchekwa ọha. Na nzaghachi maka ozi ndị uwe ojii nyere, Ngalaba Nchedo Ọha nyere ndị uwe ojii Japan iwu ka ha nyochaa ndị otu ahụ.
Ndi oru nta akuko malitere inwe mmasi n'oge a, akuko banyere emume ihu ọha Jiu n'isi ulo oru ha na akwukwo ufodu. Ndị isi ngalaba okpukpe nke SCAP nyochakwara, ha gbara Go Seigen na Jikōson ajụjụ iji chọpụta nkuzi otu ahụ. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ụfọdụ nchegbu banyere nchịkọta doro anya nke ìgwè ahụ, nke ndị isi lere anya dị ka ndị nwere ohere, Ngalaba Okpukpe ahụghị ihe ọ bụla gbasara otu ahụ ma ọ hụghị ya dị ka ihe iyi egwu ọha na eze. (N'oge Occupation, SCAP manyere mmachi zuru oke nke ihe edepụtara na isiokwu gụnyere "echiche ultranationalistic").
Akụkọ akụkọ malitere malitere ịma banyere itinye aka na Jiu. Mgbe ọtụtụ afọ lara ezumike nká n'ọrụ ya, ọ maliteghachiri ọrụ ịgba egwu ya na July 1946. Akwụkwọ akụkọ bụ isi Yomiuri Shimbun kwadoro usoro egwuregwu iri (nke o mechara merie). Na Yomiuri agbaghị akụkọ na Jiu mana akwụkwọ akụkọ ọzọ a na-agụ, Mainichi Shimbun, kọrọ na “ndị ọchịchị” na Jiu nwere nsogbu. Akụkọ ahụ kwuru na agbanyeghị otu ahụ na-akwalite omume ndị a na-enyo enyo, ndị ọchịchị malitere nyocha mana aka ha jikọtara n'ihi enweghị nhọrọ iwu.
N'etiti 1930s, n'okwu banyere okpukpe ọhụrụ dịka Oomoto na Hito no Michi, ihe dị iche iche nke ndị nta akụkọ akatọghị naanị otu ndị a maka nkwenkwe na-enweghị isi na echiche mgbochi obodo kamakwa baara ndị isi mba mba maka ịghara ime ihe niile iji chịkwaa ha. . N'oge na-adịghị anya mgbe agha nke ike ọchịchị gbanwere site na ndị Japan gaa na ndị nwe Ọrụ, ọnọdụ ahụ dị nnọọ iche. Na Mainichi tụrụ aro na ka usoro iwu ọhụrụ dị, ndị isi na-agba mbọ ịbịakwute okpukpe ọhụrụ, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ n'èzí. “Ndị ikike” akpọrọ n’isiokwu a na-ezo aka na ndị ọchịchị Japan dị ka ndị uwe ojii na ndị na-ahụ maka ime obodo n’ihi na ekweghị ka ndị nta akụkọ rụtụrụ aka n’ọrụ ma ọ bụ amụma ya n’oge mmachi.
Mmasị mgbasa ozi a nyere Jiu nsogbu nke okpukpe ọhụrụ na-eche ihu na oke ama (ma ọ bụ aha ọjọọ) nke na-enweta mgbasa ozi. N'otu aka, mmasị mgbasa ozi na-enye ndị otu ohere ohere ịkwalite ozi ha na-ege ọtụtụ ndị mmadụ. Jiu nwere mmasị n'ezie n'ịkwalite ọhụụ Jikō nwa n'oge a. N'aka nke ọzọ, ikwe ka ndị nta akụkọ nyochaa nke ọma na-enye nnukwu ihe ize ndụ nye òtù okpukpe dị otú ahụ, ebe ọ bụ na ha n'ozuzu ha enweghị ike ịchịkwa na ịchịkwa ihe oyiyi ha ma ọ bụ ụzọ mgbasa ozi si kọwaa ha, ka ọ baara ha uru.
Ndị nta akụkọ abụọ sitere na akwụkwọ ọzọ, Asahi Shimbun, kpọtụrụ ndị otu Jiu na Ọktọba 1946. Ọ bụ ezie na onye ọka iwu tụkwasịrị obi Jikōson bụ Katsuki Tokujirō kwuru na Jiu maara nsogbu nsogbu mgbasa ozi nwere ike ibute, e nyere ndị nta akụkọ ahụ ụlọ. N'ikpeazụ, ndị odeakụkọ gosipụtara ihe osise jọgburu onwe ya nke ìgwè ahụ, na karịsịa Jikōson, nke metụtara aha ọha mmadụ. Ọzọkwa, Mainichi bipụtara usoro isiokwu na-enyocha okpukpe ọhụrụ ma tinye Jiu n'etiti ihe a kọwara dị ka "okpukpe ndị na-adịghị mma." Ọ bụ n'oge a na Jiu zutere Futabayama Sadaji, otu n'ime ndị mgbagha sumo nke narị afọ nke iri abụọ. Agbanyeghị na ntinye ya mere ka otu ahụ mata mba ahụ ozugbo, ọ butere ọdachi nye ndị otu ahụ.
Futabayama ka bụ aha ụlọ na Japan; ọ meriri iri isii na itoolu na-aga n'ihu n'oge ọrụ ya, ma bụrụkwa dike mba. Ọ bụkwa ezigbo onye ịhụ mba n'anya n'oge agha ahụ na-efe eze isi ala, ọ ga-abụkwa na mmeri Japan merụrụ ya ahụ. "Afọ Futabayama" kwụsịrị mgbe ọ lara ezumike nká na November 19, 1946.
La ezumike nká enwechaghị mmetụta na ihu ọma ọha ya. A na-atụ anya na ọ ga-etinye aka na sumo mgbe ọ lara ezumike nká. Japantù Sumo dị ike nke Japan Sumo guzobere atụmatụ maka ya ịmalite ịzụ ndị na-eso ụzọ na-eto eto na Kyushu. Kama ọ họọrọ itinye aka na Jiu. Mkpebi a pụrụ iche ghọrọ ihe ịtụnanya na-atụghị anya ya maka ndị Sumo Association, ndị otu ya, na ndị otu ya na mgbasa ozi. Obere aka ya na Jiu nwere mmetụta dị ukwuu na ihu ọha ya, bụ nke mebiri ngwa ngwa na pịa site na nnukwu dike egwuregwu na-aghọgbu okpukpe okpukpe. Jiu enwetaghị mgbe ọ bụla site na nkatọ mgbasa ozi ọ kwadoro maka njikọ ya na dike a.
Futabayama zutere Jikōson na November 27, 1946, nanị ụbọchị asatọ ka ọ lara ezumike nká na asọmpi sumo, ma kpebie ịgbaso ya ozugbo. Ha kpebiri ịkwaga n’obodo Kanazawa, ọ bụ ezie na Futabayama sonyeere ha mgbe izu ole na ole gasịrị. Okwu ndị a, site na Jikōson, nyere ịdọ aka ná ntị dị egwu banyere ọdachi dịka idei mmiri na ala ọma jijiji.
Ama ọsọn̄ otu oro ke Kanazawa. Ha kwagara site n'ụlọ ruo n'ụlọ, na nsogbu nke njem mgbe niile na amụma siri ike na-ekwu n'okwu a na-agwụ mmadụ niile ike. Ndị otu a jere n'okporo ụzọ, na-arịọ ụmụ amaala ka ha soro Jikōson ma ọ bụ chee nsonaazụ nke ọdachi dị iche iche. Ozugbo Jiu rutere Kanazawa, ndị nta akụkọ gara n'ihu ikpuchi akụkọ ahụ.
Mgbe Futabayama sonyeere otu a, ebuliri ya ozugbo na ndị isi ndị Jiu. Ọ na-edugharị ndị otu ahụ n'okporo ámá, na-aga n'akụkụ Go. Ọhụhụ ama ama nke mmadụ abụọ a ma ama na-eduga n'ije ahụ nwere mmetụta ozugbo. Akụkọ banyere Jikō nwa na-ekwu banyere ọdachi ndị na-emere onwe ha gbasaa ngwa ngwa. Ala ọma jijiji na-agbawa obi mere na mpaghara Fukui tupu Jiu erute Kanazawa, na ụfọdụ ihe omume a mere ka ekwenye na nkwupụta Jiu. Asịrị Jikōson na-ekwukarị banyere amụma ya ruru na njedebe na Jenụwarị 19, 1947. Iji mee ka ọnọdụ ọha na eze dajụọ, ụlọ ọrụ ihu igwe nke Kanazawa chere na a manyere ya ikwupụta na o yiri ka ala ọma jijiji ọ ga-enwe n'ógbè ahụ dị obere.
Ngalaba Na-ahụ Maka Ọha Ọha lebara anya na ihe omume na Kanazawa, onye otu SCAP's Counter Intelligence Corps gakwuuru otu nwa okorobịa na-akparamàgwà mmadụ ka ọ nyochaa Jikōson na ndị ọzọ so n'òtù ahụ. Ihe nchoputa ya na "otu a bu ihe ndi mmadu na-acho na ndi mmadu chere na ha nwere ihe omuma ndi ozo" iji gosiputa omume nke ndi ochichi.
Onye nta akụkọ maka Asahi Shimbun onye Futabayama maara jisiri ike nọrọ na otu ahụ ụbọchị atọ. O dere ọtụtụ isiokwu na-emebi nzukọ ahụ. Ntinye aka ya na-anọchite nsogbu nke ndị otu dị ka Jiu na-eche ihu mgbe ha na ndị mgbasa ozi na-emekọ ihe. N'otu aka, Jiu na-atụ ụjọ nke ndị nọ n'èzí, ọkachasị ndị nta akụkọ, n'ihi na ha na-atụ ụjọ maka akụkọ na-adịghị mma nwere ike ịgbaso. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ mgbasa ozi nyere ha ohere ịkwalite ebumnuche ha. N'okwu a, ọhaneze mechara bụrụ nnukwu ihe mebiri otu ahụ.
Na Jenụwarị 18, 1947 ndị uwe ojii nọ na Kanazawa wakporo ụlọ Jiu ma nyochachaa ngwongwo nke ndị kwere ekwe. Jikōson jụrụ iso ha. N’abalị iri abụọ na otu nke ọnwa Jenụwarị, ndị uwe ojii nyere iwu ka ọ bịa n’ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Tamagawa n’ụbọchị ahụ na-adọ ya aka na ntị na-ejide ya ma ọ bụrụ na o kwenyeghị. N'otu oge ahụ, ha nyere ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ nke a kpọtụrụ aha n'elu ọrụ ka ha mee nyocha na Jikōson na ndị isi Jiu ndị ọzọ. Nke a bụ naanị ihe eji eme ihe, ihe ngosi maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi iji nye ihe akaebe ahụike doro anya nke ara Jikōson.
Mgbe e mesịrị n'abalị ahụ, ihe dị ka ndị isi iri abụọ wakporo isi ụlọ ọrụ ma jide ndị isi fọdụrụ, gụnyere Futabayama. Ndị nta akụkọ na ndị na-ese ihe nkiri nọ na-emekọ ihe nkiri ndị dị egwu n'ụlọ ahụ. Jikōson gbadara steepụ wee jiri ọnụ ụzọ gaa Futabayama n'akụkụ ya. Ndị uwe ojii nwara ijide ya n’aka mana esemokwu dapụtara metụtara onye mmeri nke sumo na ọtụtụ ndị uwe ojii. Ọgba aghara ahụ agwụla na nkeji, mana mmetụta nke foto foto nke tussle ahụ dị mkpa.
A kpọkọtara Futabayama n'ụgbọ ala ndị uwe ojii kpụrụ ya gaa ọdụ ndị uwe ojii, mana ejidere ya. Ọ hapụrụ ìgwè ahụ mgbe nke ahụ gasịrị, na izu ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ọ rịọrọ mgbaghara n'ihu ọha site na mgbasa ozi maka omume ya. O sonyeziri na sumo ụwa wee bụrụ nna ukwu kwụsiri ike.
Ekpesara ndị uweojii na ndị nta akụkọ ka ha na-ekwupụta na ihe ha mere bụ maka nchegbu maka nchekwa ọha, yana n'ihi na Jiu na-ezube ịhazigharị ụwa n'okpuru ọchịchị nke eze ukwu. Ha kwuru hoo haa na omume Jiu megidere Nkwupụta Potsdam. Akụkụ nke nkwupụta ahụ bụ iji kpochapụ “ikike na mmetụta nke ndị duhiere ma duhie ndị Japan ịbanye na mmeri ụwa,” ndị uwe ojii tụgharịrị ebumnuche Jiu maka mmeghari ụwa n'ime ụdị ahụ. Ndị uwe ojii ahụ nwetakwara na otu a na-egwu ọha egwu.
Ndị uwe ojii na ngalaba nchekwa nchekwa ọha nke SCAP kpebiri na Jikōson enyeghị ọha mmadụ ihe iyi egwu. A tọhapụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ na-enweghị ebubo ebubo ọ bụla; a tọhapụrụ ndị ọzọ niile n'oge na-adịghị anya. Nlebara anya nke ndị mgbasa ozi kwụsịrị mgbe Futabayama hapụrụ. Ọpụpụ Go Seigen na ngwụcha 1948 bụụrụ ndị otu ahụ nnukwu mbibi. Ọ laghachiri igwu egwu na-aga.
Jiu kwagara n'ụlọ nke onye kwere ekwe na Yokohama, ebe obere ìgwè nke ndị na-eso ụzọ biri ndụ dị jụụ, ma ọ dịkarịa ala site n'èzí. Jikōson gara n'ihu izipu ozi nye ọtụtụ ndị ama ama na ndị ama ama. Ha gụnyere kpakpando mbụ na-agbachi nkịtị na onye na-ahụ maka redio na njirimara Tokugawa Musei, na onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ na Heibonsha, Shimonaka Yasaburō. Offọdụ n'ime ha ghọrọ ndị na-akwado Jiu na ndị ọrụ ebere. Ka o sina dị, site n'oge ahụ gaa na mkpuchi mkpuchi Jiu natara metụtara nlọghachi azụ na Futabayama, Go Seigen, ma ọ bụ mgbe ụfọdụ agha ọhụrụ na-esote. Ọ dịkarịrị oke na akwụkwọ akụkọ kwa izu (shūkanshi) ma ọ bụghị akwụkwọ akụkọ.
Otu onye na-akwado Jikōson, Yamada Senta, zutere ya na 1957, kwagara London na mbido 1960, ma guzobe ụlọ akwụkwọ Aikidō. Mgbe ọ nọ na Japan, Yamada binyere ndị otu na Yokohama. O kwenyere na Jikōson bụ chi dị ndụ wee gbalịa ịme ka ụfọdụ n'ime ụmụ akwụkwọ ya na ndị ọzọ si mba ofesi kpọtụrụ ya. Mgbe Jikōson nwụrụ na 1984, Katsuki Tokujirō weghaara onye isi Jiu. Yamada hapụrụ Yokohama mgbe esemokwu ya na Katsuki pụtara. Ọ gara n'ihu na-ekwu maka Jikōson nye ndị dị iche iche ruo mgbe ọnwụ ya nwụrụ na 2010. Katsuki n'onwe ya nwụrụ na 2009, na-egosi na njedebe Jiu dị irè.
Echiche Nagaoka banyere imeghari ụwa dị ka nke Oomoto kwalitere tupu mkpagbu nke abụọ otu ahụ na 1935. Nagaoka kwenyesiri ike na ikike okpukperechi nke eze ukwu, ma sonye n'ememe ndị metụtara ofufe eze ukwu. Ọ kọọrọ ndị otu Jiu ndị ọzọ nkwenye na Japan nwere ọrụ pụrụ iche ịzọpụta ụwa n'okpuru eze ukwu. Isticdị mmụgharị mba nke ụwa a, nke tinyere Japan n'etiti etiti eluigwe na ala, adabaghị adaba na nsụgharị nke ọnọdụ nke agha tupu oge ahụ, ọ bụ ezie na otu ndị na-akwalite echiche ndị dị otú ahụ dọtara ndị ọchịchị enyo. E boro Jiu ebubo na oge agha gachara ịkwalite echiche ndị megidere ọchịchị onye kwuo uche ya.
Mpempe akwụkwọ nke nkuzi Nagaoka, Makoto no hito (Ezigbo ndị mmadụ), nke otu ahụ bipụtara n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1943 bụ akwụkwọ dị mkpa nke gosipụtara ọrụ ike Nagaoka n'ime ìgwè ahụ, karịsịa na echiche nke mmụọ na nkà ihe ọmụma. Akwụkwọ nta ahụ kwupụtara na mgbe ọnọdụ ọjọọ a gasịrị, oge nke ụwa ọhụrụ ga-amalite ma na ndị mmadụ ga-ahapụ ịkpa ókè nke ndị mmadụ, imesapụ aka, na ịhụ ihe onwunwe n'anya wee bụrụ “ezi ndị mmadụ.”
N'ụbọchị ikpeazụ nke agha ahụ, Jiu gara n'ihu na-enwe olileanya siri ike maka eze ukwu iji duo ozi dị nsọ nke mmeghari ụwa. Jikōson kwenyesiri ike na e zigara ya ka ọ bụrụ onye na-enyere eze aka iji mezuo ọchịchọ nke chi anyanwụ iji weta "iweghachi ikike nke alaeze ukwu" (kōiishin). Otu arụsị, nke e nyefere ma dekọọ na July 12, 1945, kwuru na “Jikō” bụ onye nnọchi anya Amaterasu Ōmikami e zigara iji nyere eze ukwu aka.
Jiu hụrụ ọnọdụ ọjọọ nke mba Japan ka njọ na njedebe nke agha ahụ dịka ihe ịrịba ama nke ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke. Ndị òtù ahụ kwenyere na chi dị iche iche agbahapụwo mba ahụ nakwa na mbibi gbara ha gburugburu na-egosi na oge maka ụwa ọhụrụ eruola.
Na echiche Jiu, ụmụ mmadụ kewara ụzọ anọ. Nke mbụ, okwe 責 者, dị mmadụ iri atọ (gụnyere MacArthur) ndị ga - enyere aka na mmegharị ụwa. Nke abụọ, chisekisha 責 者, e nwere puku mmadụ atọ ndị ga-enyere ndị okwe. Nke atọ, jarei 霊, bụ ndị nkịtị ndị mmadụ nke anọ na-emetụta n'ụzọ dị mfe, marei 魔 霊, bu ndi butere ihe ojo di iche-iche we di 3004. E deputara ufodu ndi Jiu, tinyere Go Seigen na nwunye ya. marei mgbe ha hapụrụ otu.
Otu okwu dị mkpa banyere Jikōson bụ nke metụtara ọtụtụ ndị isi na-adọrọ adọrọ nke mmegharị okpukpe. Ndi enye ama akara mme anditiene enye tutu mmọ ẹnam se enye ọdọhọde, m wasdịghe ndi enye ekedi adausụn̄ eke spirit oro mmọ ẹkekamade ke ifụre? Hà lere ya anya dị ka chi dị ndụ (ikikere), kedu ka ọkwa postwar si gosipụta ya? Ihe ncheta nke ndi kacha nso ya na-ekpughe echiche di iche. Mgbe ọ hapụsịrị otu ahụ, Go Seigen kwuru ụfọdụ okwu ekwughachiri na akwụkwọ akụkọ na-egosi na Jikōson duuru otu ahụ jiri ikike ime mmụọ zuru oke. Echiche a bụ ihe dị iche na Katsuki Tokujirō na Yamada Senta. Na Yamada, Jikōson bụ chi dị ndụ, ngosipụta nke ìhè zuru ụwa ọnụ nke nwere ike ịmetụta mmadụ niile.
Emume abụọ bụ isi nke Jiu na-abụ abụ Amarachi Nwankwo 璽 照 妙, nke onye uweojii na-ahụ maka okpukperechi SCAP sụgharịrị "The Celestial Jewel Shines Mysteriously." Omume ndị ọzọ bụ ide mmụọ. Ijujuōmyō sitere na aha chi ndị otu Jiu kwenyere na-ekwupụta okwu site na Jikōson. Ndị otu ga-akpọ abụ a ma dee ya na ọkọlọtọ ka ha na-aga n'okporo ụzọ.
Edemede mmụọ bụ usoro nke ịdekọ arụsị nke emume Oomoto na-emetụta site na njikọ ya na ndị otu China Kōmanjikai Dōin. Edemede nke mmụọ bu usoro nkpughe nke otutu ndi ejirila n'akụkọ ihe mere eme nke ndi China. Ọ dị iche na ịnwe mmụọ n'ihi ọchịchọ ya nke akwụkwọ. Ọ bụ ezie na ndị otu na-eji mkpughe ndị a elekwasị anya na ọgwụgwọ ime mmụọ na nke anụ ahụ, ha na-echekwa maka ịgbanwe ụwa. Site n'aka ndị ọchịchị Japan, ha nwere nnukwu nsogbu n'ihi na okwu ndị ahụ Chineke kwuru na ọ nwere ike imebi ọkwa ọchịchị. Ná mmalite narị afọ nke iri abụọ mgbe Taiwan nọ n'okpuru ndị Japan, ọchịchị Japan machibidoro ide mmụọ n'ebe ahụ. Dika ihe omume a welitere ajuju banyere onodu ndi mmadu na nke ndoro-ndoro ochichi site na ngbanwe nke uwa, ide nke mmuo nwere ike mebi emebi ma bibie usoro ichi ochichi.
N'okwu Jiu, ide mmụọ na ịdekọ ihe soro otu ụkpụrụ ahụ. Nagaoka (Jikōson) bu ụzọ kpegara chi dị iche iche ekpere n'ihu ụlọ arụsị ahụ. Nwunye Go Kazuko na nwanne ya nwanyị nke nta bụ Kanako mere ndị na-ajụ ase ma nyefee ozi ma ọ bụ nduzi sitere n'aka chi dị iche iche. Kazuko dabaara n ’ọnọdụ ndapụta dị ka mgbe o mepụtịrị ụda olu dị elu wee malite ịnata ozi sitere n’aka chi. Kanako wepụtara otu mpempe akwụkwọ ebe Kazuko ji mkpịsị odee dekọọ ozi ma ọ bụ ntụzi sitere n'aka chi dị iche iche. N'oge ndị ọzọ Kanako na-edekọ ozi ndị ahụ, ma ọ bụ Kazuko dee ya edee na-enweghị enyemaka Kanako. Ọ bụ ezie na Nagaoka ekwughị okwu ma ọ bụ dekọọ ozi ndị ahụ, ọ na-edu ndú mgbe niile n'ihi na ọ na-akpọ chi dị iche iche.
Site na Mee 31, 1945 a na-ebugharị arụsị ahụ ugboro ugboro, oge ụfọdụ ọ na-eru ogo anọ ma ọ bụ ise kwa ụbọchị. Edere ha niile na akwụkwọ ndetu ma gaa n'ihu na edere ha ruo na Nọvemba 1946 mgbe Jiu kwagara Kanazawa.
Onye ndu mmụọ nke otu a bụ Jikōson, ọ bụ ezie na ndị uwe ojii gwara ndị mgbasa ozi na ha chere na Katsuki Tokujirō bụ onye isi na-akwado otu a. Mgbe e jidere ya na Kanazawa, ebubo ndị e boro ya gụnyere aghụghọ na iri osi osikapa, ihe dị oke ọnụ ahịa n'oge agha gafere. N'ihe banyere nzukọ Jiu, ọ dị ka ọ dị njọ ma nwee nnukwu nsogbu banyere nsogbu anụ ahụ na nke uche Jikōson. Ọ bụ ezie na Jikōson nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na ndị na-akwado ya n'etiti ndị ọchụnta ego bara ọgaranya bụ ndị kwere ka ha biri n'ụlọ ha, otu ahụ egosighi ọkachamara (ma ọ bụ mmasị) n'ịhazi onwe ya nke ọma. O doro anya na arụsị juru, ha na-achịkwa ndụ ndị otu a.
Katsuki lekọtara ndị otu ahụ mgbe Jikōson gafesịrị, ndị nkwado ya gwara m na ya bụ chi dị ndụ n’onwe ya. Katsuki kwuru na Jikōson bụ mmadụ pụrụiche, chi dị ndụ. Nke a bụkwa echiche Yamada Senta.
Jiu abughi okpukpe mbu ndi Japan natara nlebara anya nke mgbasa ozi ma okwu ya na-ewelite ajuju di nkpa banyere mgbasa ozi. Nke mbụ metụtara nsogbu mmekọrịta ọha na eze nke ọtụtụ otu okpukpe na-eche ihu, ọkachasị ndị ọhụrụ na-agba mbọ maka mgbanwe site na iji ihe metụtara ọha na eze mee ihe. Ntinye nke ndị ama ama na mmegharị okpukpe ọhụrụ nwere ike bụrụ ihe esemokwu n'ihi na a na-ewerekarị ndị a ma ama dị ka akụkụ nke ihe onwunwe ọha site na ọdịdị nke ama ha na ọrụ ha. Ndi otu a nwekwara ike iche na odi nkpa ichebe ozizi ha ma obu omume ha.
Jiu dị nnọọ ala n'ihi na ọ na-egbochi ohere ịbanye na Jikōson na ndị otu. Nke a pụtara na ọ gbanwere mgbe ndị otu ahụ bịara Futubayama, otu n'ime ndị ama ama ama ama ama na mgbasa ozi n'oge ahụ. O gosiputara ihe yiri ka o bu nkwalite nke ozi ya site na ndi ama ama ama. Site na ịghapu n'etiti oke abụọ a, Jiu mere ka ọnọdụ dị na Kanazawa ka njọ nke kpatara njide nke ọnụọgụ ya. Thedị ebubo nke ebubo ahụ na otu esi mee ihe ahụ na-egosi na kama nsogbu ọ bụla otu ahụ na-akpata, ebumnuche bụ isi nke ndị uwe ojii bụ ikewapụ Futubayama na otu ahụ (ọ bụ onye bụ isi n'okwu ahụ). Jiu nyere aka na ọdịda ya nke ọha na ụzọ atọ: (1) ọ nọgidere na-enwe ọhụụ mgbe ndị nta akụkọ na ndị ọchịchị gosipụtara mmasị kachasị ukwuu; (2) o leghaara ọnọdụ ndị gbanwere agbanwe nke Japan Weghaara anya, gụnyere ọrụ nke ndị ọchịchị dị iche iche; na (3) ọ nwara ịzụlite ndị nkwado profaịlụ dị elu bụ ndị ihe oyiyi ha dị ka ndị a ma ama na ndị ọkacha mmasị ọha na eze bara oke uru maka ọdịmma ndị ọzọ.
Nke a na - eduga na ajụjụ nke nchịkọta akụkọ na ndị uweojii imekọ ihe ọnụ n'oge oge agha. N'oge bu ụzọ, ndi oru nta akuko tinyere oke aka na ma obu ndi isi ochichi maka ime ihe zuru oke banyere imeso okpukpe ohuru "enyo enyo" ma obu ito omume ha site n'igide oru ha (dika okwu nke Oomoto). N'oge agha gafere, mgbe ndị uwe ojii enweghị ikike iji gbochie ndị otu okpukperechi, nyere iwu ọhụrụ nke Ọrụ aka, ikpe Jiu na-egosi na ndị nta akụkọ rụkọrọ ọrụ na ndị uwe ojii na-emeso okpukpe ọhụrụ ndị na-agbagha ụkpụrụ omume ọha mmadụ. Ọ bụ ezie na ndị uwe ojii kpachapụrụ anya na afọ ndị sochirinụ ka òtù okpukpe dị iche iche nyere ikike ikwu okwu n'okpuru iwu ọhụrụ ahụ, ihe ndị metụtara Jiu mere n'oge dị oke mkpa n'etiti mgbanwe ọchịchị.
Okwu ọzọ chọrọ nlebara anya n'okwu Jiu bụ na Jikōson dị ka onye isi nke Tenshō Kōtai Jingū Kyō, nwanyị. Leadersmụ nwanyị ndị isi nke mmegharị okpukpe ọhụrụ, ọkachasị ndị na-akwado mgbanwe mgbanwe mmekọrịta ọha na eze, abụkarịla ndị nkatọ na-akatọkarị. Ọ bụghị naanị na-anọchite anya echiche ndị na-ama ụkpụrụ ime mmụọ aka, ha na-agbagha ọrụ okike na ọha mmadụ dabere na ikike nna ochie nke na-elekarị ụmụ nwanyị na-abụghị ụlọ anya dị ka ihe egwu mmekọahụ. N'ihe banyere Jiu, iro iro a sitere na mgbasa ozi, n'ime obodo gbara ndị otu ahụ gburugburu, yana n'etiti ndị ọchịchị Japan na ndị SCAP, nyekwuru aka na nsogbu Jiu na ọ bụ n'ezie ihe kpatara ọdịda ya.
** Ihe profaịlụ a sitere na akwukwo Benjamin Dorman nke ndi a ma ama: Okpukpe ohuru, ndi mgbasa ozi, na ndi isi na Japan (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2012) nke na-enyocha mmekorita nke okpukpe ohuru na oge agha agha. na Japan, na-elekwasị anya na Jiu na Tenshō Kōtai Jingū kyō.
Akimoto Haruo 秋 元 春 夫. 1947. “Mōsō no henreki: Jikōson no kenshin kiroku kara” 妄想 の 遍 歴 - 璽 光 尊 の 検 診 記録 か ら. ChūỌ dị mmaōron, Machị: 68 - 74.
Clart, Philip. 2003. "Mediums Mediums: Mmụọ-Ede na Ọdịbendị nke Mgbakọ Mmụọ nke China." Ethnologies 25: 153-90.
Dorman, Benjamin. 2004. “Scap 's Scapegoat? Ndị Ọchịchị, Okpukpe Ọhụrụ, na Taboo Mgbe A Lụchara Agha ”wa. ” Akwụkwọ bụ Japanese Journal of Studies Religious 31: 105-40.
Feuchtwang, Stephan. 1999. "Iweghachite Ime Mmụọ: Shlọ Nsọ Na-ede Mmụọ na Shifting [Shihting] N'okpuru Iwu Japan." Akwụkwọ akụkọ nke Institute of Ethnology, Academia Sinica 88:63 -89.
Garon, Sheldon. 1997. Kpụzi Obi Ndị Japan: Ọchịchị na Ndụ Kwa Everybọchị. Princeton, NJ: Mahadum Princeton University.
Gaa Seigen 呉 清源. 1948. “Yonaoshi go” 世 直 し 碁. ChūỌ dị mmaōron Ọktọba: 35–38.
Ike, Helen. 1998. "Asano Wasaburō na Japanese Spiritualism na Early Twentieth-Century Japan." Pp. 133-53 na JapanOge ndị asọmpi: Esemokwu na Omenala na ọchịchị onye kwuo uche ya, 1900– 1930, nke Sharon A. Minichiello dere. Honolulu, HI: Mahadum nke Hawai'i Press.
Ikado Fujio, ed. 1993. Sinetinke Nihon Shūkyō 占領 と 日本 宗教Tokyo: Miraisha.
Inoue Nobutaka 井上 信 孝. 1994. “Masukomi ka Shinshūkyō” マ ス コ ミ と 新 宗教. Pp. 516-59 na Shinshūkyō jiten, Inoue Nobutaka et al. Tokyo: Kōbundō.
Katsuki Tokujirō 勝 木 徳 次 朗. 1970. Jiu to Futabayama no kankei (1 - 3) 璽 宇 と 双 葉 山 の 関係. Ihe odide a na-ebipụtabeghị.
Mori Hidehito 森 秀 人. 1978. “Sengo shūkyō jinretsu den: Jiukyō, Jikōson” 戦 後 宗教 人 列 伝 - 璽 宇 、 璽 光 尊. Shinhyō, Septemba: 23–46.
Morioka Kiyomi. 1994. "Mwakpo na okpukpe ọhụrụ: Risshō Kōseikai na 'okwu Yomiuri'." Akwụkwọ bụ Japanese Journal of Studies Religious 21:28 -310.
Myōgan Gaijirō 明 翫 外 次 朗. 1957. "Jikōson, Futabayama kenkyo jiken no supai" 璽 光 尊 ／ 双 葉 山 検 挙 事件 の ス パ イ. Bungei Shunju, Eprel: 78–85.
Sasaki Akio 佐 木 秋 夫, et al. 1955. Kyōya mere: Shomin mba kamigami 教 祖 - 庶民 の 神 々 Tokyo: Aoki gbara.
Stalker, Nancy K. 2008. Ebumnuche Amụma: Deguchi Onisabur, Oomoto, na Rise nke Okpukpe Ọhụrụ na Imperial Japan. Honolulu, HI: Mahadum nke Hawai'i Press.
Taki Nwachukwu ō 滝 泰 三. 1956. Kamigami taabụ ō 神 々 多 忙Tokyo: Yūkan Shinchōsha.
Tsushima Michihito 対 馬 道人. 2000. “Haisen to yonaoshi: Jiu no sennen ōkoku shisō to undō 2” 敗 戦 と 世 直 し - 璽 宇 の 千年 王国 思想 と 運動 2. Kansei gakuen daigaku shakaigakubu kiyō 87: 153–65.
Tsushima Michihito 対 馬 道人. 1991. “Haisen to yonaoshi: Jiu no sennen ōkoku shisō to undō 1.” 敗 戦 と 世 直 し - 璽 宇 の 千年 王国 思想 と Kan 1. Kansei gakuen daigaku shakaigakubu kiyō 63: 337-71.
Umehara Masaki 梅 原 正 紀. 1978. “Jiu: Aru tennō shugi sha no higeki” 璽 宇 - あ る 天皇 主義 者 の 悲劇. Na Shinshū kyō mba dị 4:147–86. Tokyo: Daizō Shuppansha.
Nwa okorobịa Richard F. 1988. "Site na Gokyō-dōgen ruo Bankyō-dōkon: Nnyocha na njide onwe onye nke Ōmoto." Akwụkwọ bụ Japanese Journal of Studies Religious 15: 263-86.